China neDominica Zvino Vhura Kufamba Pakati peMarudzi Avo Maviri
musha » Dzazvino Nhau Zvinyorwa » Kuputsa Nhau Dzenyika Dzepasi Pose » China neDominica Zvino Vhura Kufamba Pakati peMarudzi Avo Maviri
Kuputsa Nhau Dzenyika Dzepasi Pose • Kuputsa Kufamba Nhau • Bhizinesi Kufamba • China Kuputsa Nhau • Dominica Kuputsa Nhau • Hurumende Nhau • Hospitality Industry • nhau • ushanyi • Kufamba Kwamugumo Kwidziridzo • Kufamba Wire Nhau • Trending Now
Kusaina Chibvumirano pakati peChina neDominica
Dominica neChina dzave nehukama hwenguva refu kubva pavakatanga hukama hwekudyidzana muna 2004. Nhasi, nyika mbiri idzi dzakasaina chibvumirano chekufamba pasina mavhiza pakati penyika dzadzo. Vagari venyika mbiri idzi vanogona ikozvino kufamba vachidzoka nekudzoka vasingade pre-kubva vhiza.
Hukama pakati penyika mbiri idzi hwakanyanya kusanganisira kudyara kweChina mubazi rezvehutano muDominica nekuvhurwa kweDominica-China Hushamwari Hospital, iyo yakatoshandura hutano hwehutano hwechitsuwa. Chipatara ndicho chete chinopa MRI masevhisi mudunhu reEastern Caribbean, kubudirira kwakaitwa nehukama hwakasimba pakati penyika mbiri idzi.
Gore rakapera raona chitsuwa chiduku cheDominica kuwedzera kusvika kwayo kune dzimwe nyika. Chibvumirano chekuregererwa kwemavhiza chichagonesa vagari vekuDominican kuwana imwe yehupfumi hwenyika hofori, ichisimbisa mikana yekufamba kune zvese zvebhizinesi nekutandara. Vagari vemuDominican vanokwanisa kufamba vhiza-yemahara kana vhiza-pakusvika kune dzinopfuura 160 nyika, inoverengera anopfuura makumi manomwe neshanu muzana enzvimbo dzepasirese izvo zvinoita kuti kuita bhizinesi munyika dzakasiyana kuve nyore.
Kana tichienzanisa, pasipoti yeChina inongobvumira vhiza yemahara kuwana kune makumi manomwe nepfumbamwe nyika nematunhu. Kupihwa kwayo kushoma kunoita kuti ive chipingamupinyi kune vagari vayo kuwana hubs dzepasi rose seUnited Kingdom kana United States. Izvi zvinoreva kuti vagari vekuChina vanofanirwa kupfuura nekunetsekana kwekutora mavhiza, kutambisa nguva yakakosha, mari uye zviwanikwa.
Zvimwe chetezvo zvinogona kutaurwa kune avo vanotarisira kuita bhizimisi muna China. Semuyenzaniso, vemabhizimisi nevemabhizimisi vanobva kunyika dzakaita seIndia, South Africa, Nigeria, kana Singapore vanofanira kusvetukira muhupu hwakafanana, sezvo vasina chibvumirano chevisa neChina. Izvi zvinoda kuzadza mapepa akareba izvo zvinogona kutungamirira kumikana yakarasika iyo inokanganisa bhizinesi.
"China haitenderi vhiza-yemahara [kuwana] kune vakawanda vane mapasipoti, uye ivo vakapa rombo iro kuDominican pasipoti yemapoka ese. Saka, chinhu chikuru chekuwedzera, "akadaro Prime Minister Roosevelt Skerrit. "[Vagari veDominican] vachakwanisa kuenda kunzvimbo dzakawanda dzebhizimisi pasi rose," akawedzera.
Dominica's expansive vhiza inopa ndicho chimwe chezvikonzero nei chitsuwa chave nzvimbo inoyevedza kune vanoisa mari vachitsvaga rusununguko rwakakura rwekufamba. Dominica's Citizenship by Investment (CBI) Chirongwa chave nzira yakakurumbira yekuita izvi. Yakavambwa muna 1993, chirongwa ichi chinopa simba vatengesi vepasirese nekuvapa chizvarwa chechipiri uye zvese zvakabatanidzwa kana mupiro waitwa kuhomwe yehurumende yenyika kana zvivakwa. Sechirongwa chine mukurumbira pasi rose, Dominica inova nechokwadi chekuti avo vanova vagari vemo vanopfuudza nzira dzakasiyana-siyana dzekuchengetedza kuchengetedza mukurumbira wayo.
Mumakumi mashoma emakore apfuura, chirongwa cheDominica chakagamuchira vakawanda vemaChina vanoisa mari vanofarira kuwana chizvarwa chechipiri senzira yekudzivirira hupfumi hwavo, mhuri yavo neramangwana. Kunze kwemikana yekufamba, kuva mugari weDominica kunobatsira mhuri kuwana masangano epamusoro edzidzo epasirese, kuona mamwe mikana yebhizinesi nemikana yemari munyika ine hukama kune mamwe masimba makuru seUnited Kingdom neUnited States.